MY REMEMBRANCE: 2008
Christmas လဲနီးပြီ.. ဟီးဟီး..တကယ်တော့ Christmas ဆိုတာ ကျတော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နဲ့ လားလားမှမဆိုင်.. ဒါပေမဲ့ ဂလိုဘယ်ခေတ်ကြီးထဲမှာ အရာရာဟာ ကူးလူးဆက်သွယ်နေတော့ Christmas ဟာ ကျတော်တို့နဲ့ မဆိုင်သော်လည်း သူအချိန်ရောက်လာတော့ ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့။
ငယ်ငယ်ကဆို ဒီဇင်ဘာ Christmas ချိန်ရောက်ရင် ပျော်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျောင်းပိတ်လို့ဗျ။ Christmas ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာမသိခဲ့ပေမဲ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ရှေ့မှာ ခရစ်ယာန်တွေ သီချင်းတွေလာဆိုကြ.. သူတို့ကို လက်ဆောင်ပေး…ပျော်ဖို့ကောင်းသား။
Christmas ဆိုတာကို ကျတော် ဘာဖြစ်လို့ ကျင်းပတာလဲဆိုတာ ဆယ်တန်အောင်ပြီးတဲ့ အထိ မသိဘူး။ နောက်မှ Christmas ဆိုတာ ခရစ်တော် မွေးနေ့ဆို သိလာရတယ်။
ခရစ်စမတ်သီချင်းလေးတွေက နားထောင်လို့တော့ ကောင်းသား။ အဲဒီတော့ youtube မှာ ကျတော်တွေ့တဲ့ Christmas သီချင်းလေးတွေ ကို နားထောင်လို့ရအောင် မျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျတော်ဟာ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို လုံးဝ ယုံကြည်တဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by puluque at Tuesday, December 23, 20083comments Links to this post
စနေနေ့မနက် အပြင်က ပြန်လာတော့ ဝယ်နေကျ ပန်းဆိုင်မှာ စံပယ်ပန်း ၁ကျပ်ဖိုးဝယ်ပြီး ဘုရားတင်ဖြစ်တယ်။ ပုလုကွေး အပတ်တိုင်း လိုလို စံပယ်ပန်းကို ၁ကျပ်ဖိုး ဝယ်ပြီး ဘုရားတင်နေကြ။ ဘယ်နေ့ တိုင်းတင်မယ်လို့တော့ စိတ်ထဲမထားပါဘူး။ ရုံးတက်ရက်ဆိုလဲ ရုံးက အပြန် ပန်းသည်ရှိသေးရင် ဝယ်ပြီးတင်ပါတယ်။
ဒီအပတ်မှ စိတ်ကလည်း ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိ။ ဘုရားတင်တဲ့ ပန်းကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ် ပေါက်နေတာနဲ့ ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်ထားမိတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေး နဲ့ ဘလော့တင်မယ်စိတ်ကူးထားတာ။ ကိုညီလင်းဆက် ဘလော့ကို ဝင်ဖတ်မိတော့ ဟိုမှာ စံပယ်တွေ စံ ပယ်တွေ ရှုပ်နေတာမို့ ဒီပို့စ်လေးကို မတင်တော့ဘူးလို့ ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ ဟော ညနေထမင်းစားပြီး မှ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်မယ်ဆိုပြီး ဒီစာလေးကို ရိုက်လိုက်တယ်။
ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စံပယ်လို စိတ်ထားဖြူချင်ပါတယ်။ ဖြူအောင်လည်း ကျင့်ကြံနေထိုင်နေပါတယ်။ တစ်ချို့သော (အပြင်လောကမှာကော၊ ကျင်လည်ရာ ဘလော့လောကမှာပါ) မဖြူစင်သူတစ်ချို့ကို တွေ့နေ၊ မြင်နေ၊ ဖတ်နေ၊ ကြားနေရလို့ပါ။ အားလုံးလဲ စံပယ်လို ဖြူစင်ပါစေ။
Posted by puluque at Sunday, December 21, 20086comments Links to this post
ပုလုကွေး ငယ်ငယ် ၉တန်းလောက်ကတည်းက ကွန်ပျူတာ ဆိုအရူးအမူးပဲ။ ဒါတောင် ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာကို uni ၄တန်းအောင် ၅တန်းနှစ်(2003) လောက်မှ ပါကြီး(ဖေဖေ)ဝယ်ပေးတာ။ ကွန်ပျူတာ ကလိနေရမယ်ဆိုရင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့။ ဒါတောင် ဘာမှလောက်လောက်လား မတတ်ဘူး။ ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေကို အားကျ၏။
မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ ကွန်ပျူတာ သုံးရင် ဆော့ဝဲလ်လေးဝယ် ဟိုကလိ ဒီကလိပေါ့။ အင်တာနက်ဆိုင်သွား၊ တွေရာဆော့ဝဲ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ၊ ကွန်ပျူတာ စာအုပ်တွေက ပါတာတွေကို မှတ်ထား၊ အင်တာနက်ဆိုင် ရောက်ရင် ရှာဒေါင်း..အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ကလိပေါ့…
စလုံးရောက်လာတော့ အင်တာနက်ဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ လက်တကမ်းမှာ။ စာဖတ်ချင်လဲ အင်တာနက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့လဲ အင်တာနက်၊ ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းတော့လဲ အင်တာနက် ၊ သီချင်းနားထောင်တော့လဲ အင်တာနက်၊ အားလုံးကို အင်တာနက် ကတဆင့်သွား နေတော့တာပေါ့။ ကျတော့ ရဲ့ အားလပ်ချိန် တော်တော်များများကို ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ကဝါးမြိုသွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ အင်တာနက်မရှိတော့စာအုပ်တွေလဲ အများကြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။ learning cd လေးတွေ ဝယ်ပြီးလေ့ကျင့် ဖတ်မှတ် ဟုတ်နေသေးတယ်။ ဒီရောက်တော့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ photoshop ဆိုလဲရောင်ဝါး ရောင်ဝါး၊ coral draw ဆိုလဲဆက်မတက်တော့ဘူး။ illustrator ဆိုမေ့တောင်နေပြီ။ matlab ဆိုရင်တော့ တီချယ် ဒေါ်စုစုဟန် ကလွဲပြီ ဘာမှမသိတော။့ solidwork ကပိုဆိုးသေး။ premier ဆို ရောင်လိုတောင် မလေ့လာဖြစ်တော့။
စာတွေထဲမှာ မှတ်မိနေတာက ပညာရပ်တစ်ခုဟာ မလေ့လာပဲ ၆လထားထားရင် ဘာမှမတတ်တော့ သလိုပဲတဲ့။ ဒါကြောင့်မနေ့က စပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ် ဒဏ်ခတ်လိုက်ပြီ။ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ အင်တာနက် မသုံးသောနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်း ကြောင်းဖြစ် ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတွင်း အင်တာနက်မသုံးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ရုံးမှာတော့ သုံးဖြစ်ပါမည်။ ရုံးမှာက ဒါနဲ့ ပဲ အလုပ်လုပ်နေရတာ ကိုး။ ကျတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်က ညနေ ရနာရီမှ ည ၁၂နာရီ အတွင်းပါ။
နောင်ဒီထက်ဆိုးလာပါက အဲဒီနေ့ကို ကွန်ပျူတာ မသုံးသောနေ့ အဖြစ်တိုးမြှင့်သွား ချင်ပါသည်။
Posted by puluque at Friday, December 19, 20085comments Links to this post
ဟုတ်ရဲ့လား မောင်ကာလုရဲ့ .......
(Puluque's Favourite Journal)
Posted by puluque at Tuesday, December 16, 20083comments Links to this post
ကျတော့ အတွက်တော့ ဒီ အဘိဓာန်လေးတွေဟာ မရှိမဖြစ်ပဲ။ ကျတော့ သုံးတဲ့စက်တိုင်းကို ထည့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကတော့ Oxford English Dictionary ရယ် Babylon English Dictionary ရယ်ပါ။
Oxford Dictionary ကတော့ Mobile အဘိဓာန်ပါ။ ကျတော့ဖုန်းထဲကို ထည့်ထားပါတယ်။ ဒီ mobile dictionary ကို java support လုပ်တဲ့ ဖုန်းတိုင်းမှာ ထည့်လို့ ရပါတယ်။ သုံးလို့လဲ အဆင်အလွန်ပြေပါတယ်။ အရင်လို dictionary စာအုပ်ကြီးကို ခါးကြားထိုးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာက နေယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။ zipfile လေးကို ဖြည်လိုက်ပြီး ဖုန်းထဲကို ထည့်လိုက်။ ပြီးရင်း run လိုက်ပါက သုံးလို့ရပါပြီ။
နောက် dictionary က တော့ ဘေဘီလုံ အဘိဓာန်ပါ။ ဒါကိုတော့ mz မှာ တွေ့လို့ သုံးကြည့်တော့ ကြိုက်သွားတာပါ။ ကွန်ပျူတာထဲ တည့်ထားရင် အလွန်အသုံးတည့်မှာပါ ။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ ဘယ်စာလုံးကိုမဆို ရွေး(select အုပ်) ပြီးတော့ ctrl+right click နှိပ်လိုက်ရင် သိချင်တဲ့ အဓိပါယ် ကို ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ pdf ဖိုင်မှာတော့ မရပါဘူး။
Mz ကဘော်ဘော်တွေ တင်ထားတဲ့ dictionary လေးကို ဒီနေရာမှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဆော့ဝဲလ်တင်နည်းလမ်းညွှန်လေး ကတော့ ဒီမှာပါ။
ဒါကတော့ အပေါ်က ဆိုဒ်မှာ ဒေါင်းလို့မရမှာ စိုးလို့ fileden မှာ ကျတော်ပြန်တင်ထားတာပါ။
Posted by puluque at Sunday, December 14, 20083comments Links to this post
ပုလုကွေး အပျင်းအလွန်ကြီးနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယခုပုံ်လေးများကို http://www.bakree.com/ ဖိုရမ်မှ အတိအကျကူးယူကာ ခိုးချထားပါသည်။ ကျတော်တို့ ဘဝလေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ ပို့စ်အဖြစ် တင်လိုက်ပါသည်။ http://www.bakree.com/ မှ အတိအကျကူးယူ ခိုးချထားပါသည်။
Posted by puluque at Tuesday, December 09, 20083comments Links to this post
Posted by puluque at Saturday, December 06, 20083comments Links to this post
ငါ မနေချင်တဲ့ ငါမုန်းတဲ့ မြို့လေး အကြောင်းကို ငါအိမ်မက် မက်တယ်။အဲဒီမြို့လေးဟာ ဧရာဝတီမြစ် ကမ်းနဖူးမှာတည်ရှိတယ်။ အဲဒီမြို့လေး မှာ ငါ ၆နှစ်လောက် နေဖို့ အကြောင်းဖန်ဖူးပေမဲ ငါတကယ်နေတာ ၁နှစ်တောင် ပြည့်ရဲ့လား မသိဘူး။ အခုအဲဒီမြို့လေးကို ငါလွမ်းနေတယ်။
အဲ့ဒီမြို့လေးကို ငါရန်ကုန်ကနေလာရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဧရာဝတီအလှကို ငါအရင်မြင်ရတယ်။ ငါရောက်တဲ့ အချိန်ဟာ များသောအားဖြင့် ညဘက်ဖြစ်ပေမဲ့ ငါကို ဧရာဝတီကို ဟာနှုတ်ဆက်တယ်။ ဧရာဝတီဟာ သူရဲ့ ချိုမြမြလေပြေတွေနဲ့ အဲ့ဒီမြို့မှာ ငါကို နေဖို့ စွဲဆောင်ပေမဲ့ ငါဟာ မီးခိုးများတဲ့ ရန်ကုန်ကနေ မထွက်ခွာ ချင်ခဲ့ဘူး။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးထဲမှာ ငါရေကူးဖူးတယ်။ ငါဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ရေကူးဘောင်းဘီ ဖင်ကျပ်လေးနဲ့ ငါကူးတော့ အဲဒီမြို့က လူတွေ ငါကို စူးစမ်းတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ကြတယ်။ ငါတို့ တခါတလေ ဧရာဝတီကမ်နဖူးပေါ်က ဧရာရဲ့ လှိုင်းတွေကို စီးနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင် မှာထမင်းစားရင်း ဧရာဝတီကို ဘီယာနဲ့ မြည်းခဲဘူးတယ်။ ဒဲ့ဒီညမှာ ဧရာဝတီ ဟာ ပျော်မြူးနေတယ်။ တခါတလေ ငါဟာ ဧရာဝတီရဲ့ ရင်ခွင်ကို ဖြတ်ပြီး ကိုဖက်ဒီဘက်ကမ်းကို ဆိုင်ကမ်းလျှောက် မောင်းဖူးတယ်။ ဧရာဝတီရဲ့ လေပြေဟာ ငါကိုကျီစယ်လို့ပေါ့။
အဲဒီမြို့လေးဟာ ငါကြိုက်တက်တဲ့ အစားစာတွေနဲ့ ငါကို ဆွဲဆောင် ဖြားယောင်းလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ သင်္ကေတလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ စားစရာတစ်ခုဟာ ငါရဲ့မနက်စာ အဖြစ် ငါနေတဲ့ရက်အတွင်းမှာ ခုန်ပေါက် ရောက်ရှိလာလေ့ရှိတယ်။ လက်ဖက်ရေ. ကော်ဖီမကြိုက်တဲ့ ငါ့အတွက် မုန်းဟင်းခါးအစားထိုး မနက်စာတစ်ခု ကို ငါမက်မက်သက်သက်စားခဲ့တယ်။ တချို့ညတွေမှာ ငါဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကို အလေးပြုရင်း ဘီယာစုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ ဘီယာစုပ်နေတဲ့ ငါတို့ကို မြင်းကြီးပေါ်ကနေ ကြည့်ရင်း သတိပေးနေသလိုပဲ။
နောက်ဲဒီဒေသထွက် ယိုမျိုးစုံဟာလည်း နာမည်ကြီးသား။ အေးချမ်းတဲ့ညတွေမှာ ငါတခုတ်တရစားလေ့ရှိတာကတော့ ပြောင်းဖူးမီဖုတ်ပဲ။ သူတို့ဒေသထွက် ပြောင်းဖူးဟာ ချိုမြိန်လှတာမို့ ငါမက်မက်မောမော စားလေ့ရှိတယ်။
အဲ့ဒီမြို့လေးဟာ အညာမဟုတ်ပေမဲ့ အညာဆန်တယ်။ စကားအပြောအဆို အနေအထိုင်တချို့ဟာ အညာရောက်နေသလိုပါပဲ။ သူတို့မြို့လေးနဲ့ ငါတို့အပြောအဆို ကွာခြားချက်တစ်ချို့ကို ငါမှတ်မိနေသား။ ဘာတဲ့“ ဟုတ်လောက်တယ်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း..ဟုတ်လောက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ငါတို့ အနေနဲ့ ဖြစ်လောက်တယ် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ သုံးပေမဲ့ သူတို့က မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးတယ်။
အဲ့ဒီမြို့လေးက လူတွေဟာ ငါတို့လိုကောင်တွေကို အထင်ကြီးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ တစ်ခါတလေ ကြည့်တက်တယ်။ ငါတို့ကို လေးစားတက်သလို ငါတို့ဆိုရင် အဲဒီမြို့လေးမှာ အစစအရာရာ ပွဲပြီးသလောက်ပါပဲ။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲပေါ့ ဘဏ်အခက်အခဲတွေ ဖြစ်တုန်းကပေါ့ အဲ့ဒီမြို့လေးမှာ ဘယ်သူ့ကို မှ ပိုက်ပိုက်မထုတ်ပေးချိန်မှာ ငါတို့ ဟာ ငါ့တို့ရဲ့ အမှတ်တဆိပ်ကတ်လေးတွေနဲ့ အိမ်ကပို့တဲ့ ပိုက်ပိုက်၊ စုထားတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေကို သွားထုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ဧရာဝတီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အဲ့ဒီမြို့လေးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေဟာ အသီးအနှံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်တယ်။ မြို့လေးရဲ့အထွက်မှာ သစ်သီး အနှံ တွေကို ရန်ကုန်တင်ပို့တဲ့ ကုန်စည်ဒိုင်လေးတွေရှိတယ်။ သြဇာသီးချိန်ဆို ငါဟာ လည်ချောင်းတွေနာလာတဲ့ အထိ သြဇာသီးတွေ တစ်ဝ တပြဲစားခဲတယ်။
အဲ့ဒီမြို့လေးမှာ မနေချင်တဲ့ ငါဟာ သူများတွေထက် ၂နှစ်ပိုနေခဲ့ရတယ်။ သူများတွေ ၄နှစ်လောက်နေတာကို ငါဟာ ၆နှစ်လောက်နေဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်။
အဲဒီမြို့လေးကို ငါနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာ ၂၀၀၆လောက်ကပေါ့။ ပါးပါးမားမားတို့လာကြိုတဲ့ ကားလေးနဲ့ ငါဟာ အဲဒီမြို့တခွင်ကို သွားရင်း နှုတ်ဆက် ခဲတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ မြို့နယ်မှုး(ပါးပါးရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လဲဖြစ်၊ မာမီတပည့်လဲဖြစ်၊ ငါနဲ့ ဇာတိတူလဲဖြစ်သူ…) ကဧည့်ခံကျွေးမွေးတဲ့ နေလည်စာကို တောာင်ဘက်ကြယ် စားသောက်ဆိုင်မှာ စားသောက်ရင်း ငါဟာဧရာဝတီရဲ့ အလှကို နောက်ဆုံးခံစားခဲ့တယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ငါမနေချင်တဲ့ ငါမုန်းတဲ့ မြို့လေး ငါလွမ်းနေတယ်။ မြို့လေးရေ လွမ်းတယ်ကွာ…။
ဒီပို့စ်လေးမှာ ကျတော်သုံးထားတဲ့ “ငါ” “ငါတို့” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေး ဟာ အနည်းငယ် ရိုင်းတာ မို့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ “ငါတို့” ဆိုတာ သမုဒ္ဒရာကြီး ဖြစ်ရင် “ငါ”ဆိုတာဟာ သမုဒ္ဒရာထဲက ရေတစ်ပေါက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးဟာ ကျတော့ မန်မိုရီစတစ်ထဲမှာ ခိုအောင်းနေတာ ဒီညနဲ့ဆို ၉ရက်မြောက်ပြီပေါ့။ ဒီပို့စ်လေးဟာ ကျတော် အိမ်မက်က လန့်နိုးပြီး ထရေးထားတဲ့ ကျတော့ရင်တွင်းဖြစ် စစ်စစ်လေးပါ။ တခြား သောသူများထံမှ မှီငြမ်းထားခြင်း လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါကြောင်း အာမခံပါသည်။ ဓါတ်ပုံလေးကတော့ ကျတောအဖွဲ့တွေ အာလုံးယူနေကြ +x-xx တို့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေထဲက တစ်ခုပါ။
Posted by puluque at Monday, December 01, 20089comments Links to this post
ကိုယ်ကိုကိုယ် မုန်းတဲ့ အချက် ၁၀ချက်တဲ့ဗျ။တကယ်တော့ မုန်းဘူးဗျ..ဒါကြောင့် နည်းနည်းတော့ ခေါင်းစားတယ်။
ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားတာ အဲ့ဒီအချက်က ခေါင်းထဲ အရင်ဝင်လာတယ်။ တကယ်ပါ။ ကျတော် ပျော်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ညစ်ရင် ဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာမှာ လာပေါ်ရော.. အဲ့ဒီဟန်မဆောင်တက်တဲ့ အရာကြီးကို နည်းနည်းတော့မုန်းတယ်။
ဟာ..ဟ။ ကိုယ်အသက် ကို ပြန်ကြည့်တော့ မငယ်တော့ဘူးဗျ။ ချစ်ချစ်မရှိသေးတဲ့ အတွက် တစ်ခါတစ်လေ သိမ်ငယ်သလို တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ကိုကိုယ် မုန်းနေမိတယ်(အခု အချိန်မှာပေါ့ဗျာ်။ မစွန်ရကောင်းလားလို။။(ရတာမလို လိုတာမရတဲ့ ကျတော့ ဘဝပါ)
ဒါလဲပဲ မုန်းစရာကောင်းတယ်။ သယ်ရင်းတွေ အပြင်သွားရင် ကျတော့်မှာ မလိုက်နိုင်ဘူး။ နတ်ထဲမှာ ဟိုဝင် ဒီဝင် .. ဟိုဆော့ဝဲလ် ဒေါင်း၊ ဒီဆော့ဝဲလ် စမ်းနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်နေတာတွေ…
ကွန်ပျူတာကို စွဲလမ်းတာရဲ့ အဆက်အဖြစ် ဆော့ဝဲတွေကို ရူးသွပ်တာကလည်း တစ်ခါတလေ မုန်းဖို့အရမ်းကောင်းတာဗျ။ ဟိုတုန်းကဆို National ၊ CDworld ၊ Active တို့သွားပြီး ဘာဆော့ဝဲများအသစ်ရှိသလဲ လို့ သွားချောင်း၊ သွားဝယ်ရတာ အမော..ရတဲ့ ပိုက်ပိုက်လဲ ဒါတွေနဲ့ ကုန်တာ။ Progamming လဲ သူများလို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရေးတက်ဘူးဗျ။
၅။ ဖာသိ ဖာသာ မနေတက်တာ
တော်တော်ဆိုးတဲ့ အကျင့်ဗျ။ ဖာသိ ဖာသာ မနေတက်ဘူး။ ကိုယ်သိရင် လုပ်ပေးလိုက်ရမှ။ ပြောပြလိုက်ရမှ ကျေနပ်တာ။..မှားနေရင်လဲ ဝင်ပြောလိုက်ရမှ..
အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရင် အရမ်း လောတယ်။ မြန်မြန်လိုချင်တယ်။ ဒါလဲ မကောင်းဘူးဗျ..
အလုပ်ကို မြန်မြန်ပြီးအောင် လောတက်တော့ မသေသပ်တော့ဘူး။ တစ်ခါတလ လျှပ်ပြာလျှပ်နဲ့ ။ ဒါလဲ မုန်းစရာကောင်းတယ်..
ကျတော်ဟာ တော်တော့ကို ခေါင်းမာတဲ့ လူ. ။ ဟင်ဆိုရင် လှည့်မကြည်တက်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ ..လုံးဝ တာ့ တာပဲ…။
အရမ်းခံစားရလွယ်တယ်။ ကြုံလိုပြောပြရရင် ဟိုတစ်နေ့က စာရေးဆရာ အစုံ ပါတဲ့ ငြိမ်သက် တစ်မိနစ် ဝတ္ထုတို စာအုပ်လေးကို ရုံးအပြန် ရထားပေါ်မှာ ဖတ်နေမိတယ်။ ကျတော်က အဲဒီလို ဝတ္ထုတို စာအုပ်တွေဆို နောက်ဆုံးကနေ စဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီထဲက ဆရာမ မဦးရဲ့ အက်ကွဲသံဇဉ် ဝတ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ပြီး ခံစားရလွန်းလို့ စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီး မငိုမိအောင် စိတ်ပြောင်းရတာ မနည်းဘူး။ မဖတ်ပဲလဲ မနေနိုင်အောင် ဝတ္ထုလေးကလည်း ကောင်းလွန်းတယ်။ အဲဒီလို ယောက်ျားလေးတန်မဲ့ ခံစားလွယ်တာလဲ ကိုယ်ကို ကိုယ် မုန်းမိတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခု။
တစ်ခါတလေ အရမ်းစိတ်ဆိုးတက်တယ်။ တော်ရုံနဲ့ တော့ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ စိတ်ဆိုးရင်လဲ မပြေဘူးဗျ။ အိမ်မှာတုန်းက စိတ်ဆိုးရင် အဲဒီနေ့ မန်မန်း မစားတော့ဘူး..ဟဟ။
မမဝါဝါရေ..ဖြစ်ညှစ်ပြီးရေလိုက်ပြီဗျ..ကျတော် ဘယ်သူကို လက်လွှဲပေးရင် ကောင်းမလဲ။ စိတ်ထဲပေါ်လာတာတော့ နှစ်-ကျောင်းအတူ ဆင်းတဲ့ သယ်ရင်း ဇူလိုင်…။
တရား၊ဓမ္မတွေနဲ့ ပျော်မွေ့အောင် တရားအလှူပေးလေ့ရှိတဲ့ ကျတော်နဲ့ မွေးနေ့တူ ညီငယ် အောင်ဦး….။ ကျတော့ မွေးနေ့မှာ တိတ်တိတ်လေး ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးလာလုပ်သွားတဲ့ ညီမငယ် ဂူဂူး…။ ပန်းသွန်းတဲ့ ဥယျာဉ် ပိုင်ရှင် ကဗျာများနဲ့ ပျော်နေသူ မီးလေးဇာ…..တို့ပါပဲ ..အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်..အဆင်ပြေရင် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်….
Posted by puluque at Friday, November 28, 20087comments Links to this post
နှစ်ကျောင်းအတူဆင်းတဲ့ သယ်ရင်း ဇူလိုင် တက်ထားလို့ ရေးလိုက်ပါအုံးမယ်။ ကျတော် တီဗီတို့ ရုပ်ရှင်တို့ ကြည့်ရတာ ကို စာဖတ်တာလောက် ဝါသနာမပါဘူးဗျ။ ငယ်ငယ်ကဆို ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရင် ခေါင်းမူးလို့ အဲ့ဒီနေ့ဆို ဘယ်လိုမှ နေလိုမကောင်းဘူး။ တစ်ချို့ ကားကောင်းလေးတွေတော့ ကြည့်ပါတယ်။
ကာတွန်းကားကတော့ နည်းနည်းကြိုက်တယ် ပြောရမလားပဲ။ ကျတော်မှတ်မိနေတာကတော့ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်က (အရေအခင်းပြီးစလား မဖြစ်ခင်လား မသိဘူး) တီဗီကနေ လာသွားတဲ့ ကာတွန်းကားလေးကို တော့ဝိုးတိုး ဝါးတား မှတ်မိနေသား။ ဇာတ်လမ်း လေးက အခုခေတ်ပါဝါ ရိန်းဂျားဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ သူရဲကောင်း ငါးယောက်လောက်နဲ့ သိပ္ပံကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေး။ တစ်ယောက်စီမှာ ဝတ်စုံအရောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ အစွမ်းကိုယ်စီရှိကြတယ်ဗျ။ သူတို့အားလုံး စုပေါင်းပြီး လည်း စက်ရုပ်ကြီးတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်။ အရေးကြုံရင် သူတို့လက်ကနာရီလေးကို နှိပ်ပြီး လက်ကို လေမှာမြှောက်လိုက်ရင် လက်နတ်တွေ သူတို့ကိုယ်မှာ တပ်ဆင်သွားတယ်။ လူဆိုး ကြီးကတော့ မျက်စီတစ်ဖက်လပ် ပင်လယ်ဓားမြပုံစံပဲ။ ဒီလောက်ပဲ မှတ်မိတော့တယ်ဗျ။(ဇာတ်ကားနာမည်နဲ့ ကြည်လို့ရတဲ့ဆိုဒ်ရှိရင် ပြောပြပေးပါအုံး..ပြန်ကြည်ချင်လို့)
ကျတော်မဖြစ်မနေ ကြည်ဖြစ်တဲ့ ကာတွန်းကားကတော့ အားလုံးကြိုက်တဲ့ tom and jerry ပါ။ အဲ့ဒီကားတွန်းကား ကြည့်ရင် ကျတော့မာမီက ကလေးမဟုတ်လူကြီးမဟုတ် ကားတွန်းကားတွေ ကြည်တယ်လို့ပြောပြီး မာမီပါလာကြည့်ပြီး တခွီခွီးရယ်လေ့ ရှိတယ်။
ဒီလောက်ပဲ သယ်ရင်းရေ… အခုတောင် toms and jerry နောက်ဆုံးထွက်ကားကို ကြည်မလို့ ရုံ့းမှာ rapidshare ကနေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေတယ်ဗျ။
လိုချင်ရင်ပြော..မြန်မာပြည်က ကျတော့အိမ်မှာ tom and jerry အခွေ (၃၀)ကျော်ရှိတယ်…ငှဲငှဲ. ..ငှဲ
Posted by puluque at Tuesday, November 25, 20087comments Links to this post
ဒီနေ့ မနက် အိပ်ယာထကတည်း ပျော်ရွှင်နေပါသည်။ ဟားဟား..ကျတော် solidwork ကို torrent နဲ့ ဒေါင်းနေတာ ၆ရက်လောက်ရှိသွားပြီ။ ဒီနေ့ မနက်တော့ ၁၀၀% ပြည့်သွားလို့ အားလုံးအိုကေပါသည်။ အားလုံးပေါင်း ဒေါင်းချိန် ၃ရက်နဲ့ ၁၆နာရီတိတိကြာပါတယ်။ ကျတော့ လက်တော့ အစုပ်လေးနဲ့ ညီးနေလောက်ပြီ။ rs premium account မရှိတဲ့ ဒွတ်ခတွေပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကျတော်လိုချင်နေတဲ့ solidwork လည်းရပြီ။ ဟော အခု စာသားလေးတွေလဲ.. ကျတော်နှလုံးသားထဲက ရောက် ရှိလာလို့ အမြတ်ရလိုက်တယ်ဗျာ…
လောကဓာန် ၏ အထုအထောင်းများသည် နောက်ဆုံး၌
လူတစ်ချို့၏ ကောက်ကျစ်မှုများသည် နောက်ဆုံး၌
အကျွန်ုပ်အား အတွေအကြုံများစွာ ရစေ၏.
အကျွန်ုပ်အား ပထမဆုံးကို ဖြစ်စေသည်..
Posted by puluque at Sunday, November 23, 20086comments Links to this post
ဒီအကြောင်းတွေ ငါမကြားချင်ဘူး။ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ၊ ရင်လဲနာတယ်။ ခံစားရတယ်။ တကယ်ပါ။ သူလို တော်တဲ့လူတွေရဲ့ စွမ်းအားတွေ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ရှေရှောက် ပျောက်ဆုံးဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ နောင်ဆို မြန်မာလို့ဆိုရင် “မရှုတ် မလုပ် မပြုတ်”ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးပဲ ဖြစ်လာတော့မယ်နဲ့ တူပါတယ်။ အခုလဲ တော်တော်များများ “မရှုတ် မလုပ် မပြုတ်” ဖြစ်နေကြပြီလေ။ ငါအပါ အဝင်ပေါ့။
အညွှန်တလူလူ တက်နေတဲ့ အပင်ကို ခေါင်ညွန်ကနေဖြတ်လိုက် သလိုပဲ။ တချို့ကလည်းပြောမပေါ့။ ခေါင်ညွန့် ကျိုးသွားရင် နောက်ထပ်ဘေးကနေ အညွန်တွေ ထပ်ထွက်လာမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ဘေးကအညွန်တွေလေ။ ခေါင်ညွန်မှ မဟုတ်တာ။ ခေါင်ညွန်နဲ့ ဘေးကထွက်လာတဲ့ အညွန့် တခြားစီပါ။
နည်းနည်းတော့ကြာပြီ။ the voice weekly editorial ထဲမှာလား။ ဆရာမဂျူး ပြောတာလား မမှတ်မိတော့ဘူး။ အခုခေတ်မှာ လူတော်ခေါင်းဆောင်တွေ ရှားသွားပြီတဲ့။ ဟိုခေတ်က ဒေါက်တာဘမော်လို့။ ကိုအောင်ကျော်လို ရဲရဲတောက် ခေါင်းဆောင် ကောင်းတွေ ပေါ်ခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ မရှိသလောက်ပဲ။ နည်းနည်း ရှိလာမယ်ဆိုရင်လဲ အမြစ်ကပါတူးထုပ် လိုက်တော့ မရှိတာလဲ မဆန်းပါဘူး။
နိုင်ငံတော်တော်များများက brain drain ကိုပြသာနာ တစ်ရပ်လို စိုးရိမ်ကြတယ်။ ကျတော့ကတော့ brain drain ထက် brain block ကိုပိုစိုးရိမ်မိတယ်။ ကျတော်မသေသေးရင် နောင် အနှစ် ၂၀၊ ၃၀ လောက်မှာ ကျတော်တို့ brain block တွေ ခရီးဆက်ကြတာပေါ့။
ကျတော်သုံးထားတဲ့ brain block ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း မှန်ချင်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ မှားနေရင် ပြင်ပါမယ်။
the above photo is taken from http://theguiridispatches.wordpress.com
Posted by puluque at Wednesday, November 19, 2008 1 comments Links to this post
ဒီအချိန်ရောက်ရင် ကျတော့ စိတ်တွေ ဖောက်ဖောက်လာတယ်။ စိတ်ပိန်တယ်..တကယ်ပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရောက်ရင် ဒီအလုပ်ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။ ကျတော် ကလည်း အဲဒီအလုပ်လောက် မလုပ်ချင်တာ အဲဒီအလုပ်ပဲ။ အမေရိကန် သမ္မလုပ်ပါဆိုရင်တောင် ဒီလောက် ငြင်းဖြစ်မယ်မထင်ဘူး..ဟိဟိ..
အဲဒီအလုပ်ကိုတော့ လုပ်ရမှာ သေမလောက် ကြောက်တယ်။ မလုပ်လို့လဲ မဖြစ်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာက ကိုယ်မလုပ်ရင် ဘယ်သူမှ လာကူလုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီအလုပ်ကို လုပ်ရတာကလဲ မစားသာဘူးဗျ။ လက်ကလည်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ် လုပ်ရတယ်။ စိတ်ကလည်း အဲ့ဒီထဲမှာ နှစ်ထားရသေးတယ်။ လူကလည်း တစ်ခါတလေ မတ်တပ်ရပ်. ချွေးကလည်းထွက်သေး။ ပင်ကလည်း ပင်ပန်းသေး။
အဲ့ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေလို့ ကျတော် ဘလော့လဲမလည်နိုင်. စာတွေလည်း ကောင်းကောင်းမဖတ်နိုင်ဗျာ။ တကယ်စိတ်ပိန်တယ်။ အခုလဲ ဘလော့ပို့စ်လေးရေးမယ် လုပ်နေတာ အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ရတော့မယ်။ ..
ဘိုင်ဘိုင် ကျတော် မီးပူသွားတိုက်လိုက်အုံးမယ်…တာ့တာ..။
Posted by puluque at Monday, November 17, 20087comments Links to this post
စကော်ပီယံ တစ်ကောင် ၏ ညဉ်းချင်း
နိုဝင်ဘာ ရဲ့နေ့ရက်များဟာ စကော်ပီယံ (scorpion) တစ်ကောင်ကို ဘာအညှိုးနဲ့များ ရက်စက်နေတာလဲ။ နိုဝင်ဘာနေ့ရက်တွေ စကတည်းက စကော်ပီယံကောင်လေး ဘာမှန်းမသိ စိတ်ညစ်နေရတယ်။ ရုံးမှာလဲ အဆင်ပြေတယ်၊ အိမ်နဲ့ လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာအတွက်မှန်းမသိသော စိတ်ညစ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်လေ။
နိုဝင်ဘာနေ့ရက်တွေဟာ စကော်ပီယံကောင်လေးကို အရှုပ်များနဲ့ ပတ်ချာလည်စေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကလည်း ရုံးပိတ်ရက် ဖတ်မယ်လို့မှန်းထားတဲ့စာအုပ်တွေ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
စကော်ပီယံကောင်လေး ဖတ်မယ်လို့မှန်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ JAMES CARVILL ရဲ့ mechanical engineer’s data handbooks နဲ့ Jay Armstrong , Jen Dehaan တို့ရဲ့Macromedia Flash 8 စာအုပ်တွေပါ။ နောက်ပြီး ရွှေ ၅၀က ဖတ်ဖို့ကျန်နေတာတွေ၊ ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့ ဆံရစ်ဝိုင်း ဝတ္ထုတိုစာအုပ်..အားလုံးကို လုံးဝကို မဖတ်လိုက်ရဘူး။
သောကြာနေ့တိုင်း အတူနေသယ်ရင်းတွေ အားလုံး အလုပ်ကနေအိမ်တန်းမပြန်ပဲ ပင်နဆူလာမှာ စုရပ်ထားပြီး စားကြသောက်ကြ၊ လိုအပ်တာတွေဝယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၁၀နာရီကျော်ပြီ။ ရေမိုး ချိူး၊ကွန်ပျူတာ ရှေထိုင်တော့ ၁၁နာရီကျော်လို့ ၁၂ထိုးပြီ။ သတင်းလေး ဘာလေးဖတ်ပြီး အိပ်ရာဝင်တော့ ၁နာရီကျော်ပေါ့။ ဖုန်းကို alarm ၄နာရီပေးပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ အိမ်က toshiba ကောင်က လေယာဉ်ကွင်းဆင်းမှာဆိုတော့ မနက် ၅နာရီလောက် အိမ်ကထွက်မှ အဆင်ပြေမယ်လေ။ သူကို ပို့ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ မနက် ၈နာရီကျော် ၉နာရီ ။ အဲဒီတစ်နေ့လုံး လူကညီးစီစီကြီးနဲ့ ဘာမှကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တောဘူး။ စိတ်ညစ်နေလို့ အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်တော့မှ ပိုဆိုးသွားတယ်..ဟားဟား.. အရှုပ်ထုပ်တွေ ဆက်မရေးတော့ပါဘူး။
ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်လဲ စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ အခင်ဆုံးသယ်ရင်းရဲ့ အဖေနဲ့ အမတို့ စလုံးလာပြီး ဆေးလာစစ်ကြတော့ ပိတ်ရက်တွေမှာ သူတို့ကို ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ပို့တာနဲ့ အချိန်ကုန်သွားမယ်ထင်ပါထယ်။
ဘလော့ဂါ သယ်ရင်းတွေရဲ့ ဘလော့တွေကိုလည်းမလည်ဖြစ်သေးပါ။ အချိန်လုပြီး လာရောက်လည်ပတ်ပါမည့် အကြောင်း စကော်ပီယံလေး တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုဝင်ဘာလမှာ လူ့လောကထဲရောက်ရှိလာတဲ့ စကော်ပီယံလေး နိုဝင်ဘာလလေးကို ချစ်ပါသည်။
Posted by puluque at Thursday, November 13, 2008 8 comments Links to this post
၁။အမေရိကန် သမ္မတရွေးပွဲတွင် အိုဘားမား အနိုင်ရသော်လည်း ကျွန်ုပ် ဒီနေ့ ရုံးမှ စောစော ပြန်၍မရပါ။
၂။ အမေရိကန် မှစတင်သော စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လယ်သမားတစ်ချို့ နွေစပါးစိုက်ရန် လယ်ထွန်နေကြသည်။
၃။ ဆရာမလေးသည် ကျောင်းအုပ်ကြီးဆူသဖြင့် ကျောင်းသားများအား သချာင်္ပုစ္ဆာများကို အိပ်စာ တွက်ခိုင်းသည်။
၄။ ဈေးသည်များ ဈေးရောင်းနေချိန်တွင် ညနေမိုးချုပ်သဖြင့် လမ်းမီးများလင်းလာသည်။
၅။ ပုလုကွေးသည် ဘလော့ပို့စ်တင်ရန် ပျင်းသဖြင့် သူငယ်ချင်း ဘလော့များထံ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အလည်သွားသည်။
Posted by puluque at Wednesday, November 05, 20082comments Links to this post